ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူနှင့်ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများအတွက်လက်ကား A20 Golden Colour CBN ပွန်းပဲ့သောအမှုန့် | SinoDiam
ဗဓေလသစ်ဘောင်အသုံးပြုခြင်းအတွက် A20 ရွှေရောင် Cubic Boron Nitride ပွန်းပဲ့မှုအမှုန့်
၁။ Cubic Boron Nitride နိဒါန်း
CBN (ကုဗဘိုနိုက်ထရိတ်) superabrasive သည်မြင့်မားသောမာကျောမှုနှင့်အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ရိုးရာပွန်းစားမှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုထက် ၄ ဆပိုများသည်။ CBN သည်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည့်စျေးကွက်၊ လေအားစူပါအလွိုင်းများနှင့်အပူမှုတ်လိမ်းခြင်းမှသည်မော်တော်ယာဉ် bearing နှင့်ဂီယာစက်ရုံများအတွက်ပိုမိုခိုင်မာသည့်သံမဏိအထိထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်နှင့်အပြောင်းအလဲအနည်းဆုံးအချိန်ကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။
CBN-A20၊ ရွှေရောင်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသော monocrystal ကိုပုံမှန်ပုံသဏ္andာန်နှင့်မာကျောသောကြောင့်။ Excellent ကခြင်းကို tetrahedron ပုံသဏ္andာန်နှင့်မိမိကိုယ်ကို angular ချွန်ထက်။ အလွန်အမင်းလိုအပ်သော vitrified နှောင်ကြိုးနှင့်သတ္တုနှောင်ကြိုးကိရိယာများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြိတ်ဘီးများကို ferrous သတ္တုနှင့်သတ္တုစပ်များအားပြုပြင်ရန် electroplated tools များအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
CBN အမှုန့် 2. ဇာတ်ကောင်
ကြည်လင်သော, blocky ကြည်လင်,
ferrous သတ္တုများကို process
အဓိကအားဖြင့် Self- ပြတ်သားမှု
electroplating tools တွေထဲမှာ,
CBN အမှုန့် 3. နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာများ
(ကီလိုဂရမ် / mm2)
elasticity ကိန်းပကတိ (104MPa)
ရှေ့သို့ SND-G10 အဝါရောင် RVD ကြမ်းတမ်းသောစိန်အမှုန့်ဗဓေလသစ်ဘွန်းစူပါဘရပ်စ်
နောက်တစ်ခု: မြင့်မားသော Wear ခံနိုင်ရည်ရှိသည်နှင့်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာသတ္တုတွင်းများအတွက် 1308 PDC ဖြတ်
A10 ပယင်းကျောက်ရောင် Boron Nitride Abrasive Po ...